रुसको सर्वाधिक महंगो रंगशाला जुन मौसमअनुसार यसको छत आँफै खुल्ने र बन्द हुन्छ – Rabin's Blog
Buletin Post June 15, 2018 June 15, 2018 समाचार	0
सेन्ट पिटर्सवर्ग रंगशाला क्षमता : ६४,२८७ निर्माण : अप्रिल २०१७ लागत : १.५ बिलियन डलर (१ खर्ब ६० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ)
खेलहरू १५ जुनमा मोरक्को र इरान, १९ जुनमा रसिया र इजिप्ट, २२ जुनमा कोस्टारिका र ब्राजिल, २६ जुनमा नाइजेरिया र अर्जेन्टिना, ३ जुलाईमा प्रि–क्वार्टरफाइनल, १० जुलाईमा सेमिफाइनल, १४ जुलाईमा तेस्रो स्थानका लागि खेल हुने
रसियाको दोस्रो ठूलो सहरमा रहेको सेन्ट पिटर्सवर्ग विश्वकै अति सुन्दर स्पोर्टस एरिनामा उल्लेख छ । क्रेस्टभेस्कीलाई सेन्ट पिटरसवर्ग रंगशालाका नामले पनि चिनिन्छ । रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको गृहनगरसमेत रहेकाले यो क्षेत्र अति नै संवेदनशील मानिन्छ । यो रंगशाला विश्वकै महँगो तथा उत्कृष्ट रंगशालामध्येमा पर्छ । रसियाले विश्वकप आयोजना गर्नुअघि नै यसको निर्माण गरिएको हो । यो रंगशालाको डिजाइन जापानी आर्किटेक्ट किसो कुरोसवालेले गरेका हुन् । रंगशालाबाहिरको मौसमअनुसार यसको छत खुल्ने र बन्द हुने गर्छ । सन् २०१० देखि यसको निर्माण थालनी भएको थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
८ वर्षको कडा मिहिनेतपछि सेन्ट पिटरसबर्ग रंगशाला निर्माण भएको हो । रंगशाला निर्माण गर्न १ दशमलव ५ बिलियन डलर खर्च भएको छ । यो रंगशाला विश्वकै महँगो रंगशालामा पर्छ । यसको डिजाइन बन्द कोठाभित्रको ‘जहाज’जस्तो बनाइएको छ । रंगशालालाई पूरै छानाले छोपिएको छ । यहाँबाट फिनल्यान्डको खाडी क्षेत्र सहजै अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
नेपालकी पहिलो महिला सम्झना राई बनिन् कोरियन पुलिस अफिसर
पूर्वआइजीपीकी छोरीको तानाशाही : सशस्त्र प्रहरीको दुरुपयोग गर्दै विद्यालयमा तोडफोड साथै दुव्यर्वहार !
कस्तो पापी बाउ !इज्जत जोगाउन आफ्नै बुवाले छोरीलाई जिउँदै जलाए. १९ बर्षिय लक्ष्मी यसरि एकछिनमै खारानी बनिन् (तस्बिर सहित)
पोखराको सेती नदिबाट आयो डरलाग्दो खबर, प्रहरी नै परे चकित – हेर्नुहोस भिडियो सहित
भर्खरै चिनले दियो नेपाललाई यस्तो सोच्ने नसकिने अफर…के स्वीकार्छ त नेपाल सरकारले ?